Semalt Inotsanangurira Nei Webhusaiti Webhusaiti Yakakosha Kune Bhizinesi Rako Kukura
Nheyo yakakosha yekushambadzira kwakabudirira kuziva mutengi wako uye kufadza kune zvavanoda. Kuzivisa kwe izvo vashanyi vewebsite yako vari kutsvaga uye maitiro ekuvapa ivo vanogona kuita kana kuputsa bhizinesi. Webhusaiti analytics zvishandiso zvinogona kuve zvakakosha mukutsvaga izvo zvinoita kuti vashanyi vako vabike uye maitiro ekushandura kushanya kwavo mukutengesa.
Munyaya ino, tinotsanangura kuti webhu analytics chii uye nei chakakosha mukukura kwako kwebhizinesi.
Chii chinonzi Web Analytics?
Web Analytics kuunganidzwa kwewebhu-kwakavakirwa ruzivo kuti uwane ruzivo uye kusimudzira ruzivo rwevashandisi nepo online.
Webhusaiti analytics inoshuma anoshanyira yako saiti uye maitiro vashanyi vanozvibata kana ivo varipo. Uine yakanaka analytics chishandiso, unogona kuona kuti vakomana vako vachembera zvakadii, vatengesi vavo, kwavanogara, uye zvimwe zvakawanda. Iwe unogona zvakare kuona, sezvazviri pakabaya bhatani, chii chakavatungamira kune webhusaiti yako, kuti vakatora nguva yakareba sei ikoko uye pane iyo mapeji, etc. Iyi mhando yedata inokosha pakuita kuti webhusaiti yako ibudirire sezvinobvira uye mukugadzira zvemukati zvinofadza pamusika wako wechinangwa. Nekudaro, iwe unogona kugadziridza uye shanduko zvinoenderana newebsite analytics mishumo; izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya mukukudza rako bhizinesi.
Nei analytics webhusaiti ichibatsira?
Ziva vashanyi vako uye uvandudze yavo mushandisi ruzivo!
Paunenge uchiita sarudzo nezvebhizinesi rako, zvakakosha kuti usangotarisira yako vatengi, asi pazvinogoneka kuti uvandudze ruzivo rwevashandisi. Sarudzo dzakadaro dzinofanirwawo, kazhinji kuwanda, kubatira kukwezva vatengi vatsva. Nezvose izvi mupfungwa, kuziva vashanyi vako webhusaiti kwakakosha mukuita sarudzo dzakachena.
Kana iwe uine pfungwa yehuwandu hwevashanyi kune yako saiti - kureva ivo jere, huwandu hwezera, kwavanogara, izvo zvavanofarira, nezvimwe - iwe uchave uri munzvimbo iri nani yekuvandudza ruzivo rwavo rwevashandisi. Nenzira imwecheteyo, kana uchigona kuteedzera michina michina, mabhurawuza uye masisitimu anoshanda ayo vashanyi vako vanoshandisa pakusvika kune yako saiti, iwe unokwanisa kuona zviri nani uye nekuvandudza kuwirirana kwewebsite yako.
Muenzaniso uri nyore ndewekuti kana ukateedzera ruzhinji rwevashanyi vako uchishandisa nharembozha, iwe uchaziva kuisa pamberi pekugadzira yako webhusaiti inoshamwaridzana. Saizvozvowo, kana maturusi ako ezve analytics akateedzera zera nehunhu hwevashanyi vako, unogona kugadzirisa webhusaiti kuti ive yakanyanya kubatsira uye inofadza kwavari.
Kuziva vashanyi vako inzira yakanaka yekuenderana neyako webhusaiti kumusika chaiwo. Kuvandudzwa kwerudzi urwu kunokurudzira vanhu kuti varambe vari pawebhusaiti yako kwenguva yakareba uye, zvakare, zvinotungamira kune yakakwirira shanduko yekutendeuka.
Tsvaga izvo zvirimo zvinobudirira
Webhusaiti analytics zvishandiso zvinoratidzira yako yepamusoro zvemukati. Unogona kudzidza kuti ndezvipi zvirimo zvinokwezva maonero mazhinji, kushanya refu, uye ndeapi mapeji anoshanyirwa nevanhu mushure. Mune dzimwe nzira, iwe unogona kuona nyore nyore kuti ndeupi maringe akabudirira zvakanyanya, achibvumira kuti uashandise kune yako zvakanaka.
Semuenzaniso, kana iwe waona chidimbu chakakurumbira chemukati, iwe unogona kuwedzera zvitenga zvekutengesa, kufona kune chiitiko mabhatani, nezvimwewo kune peji kana kutungamira vashanyi zviri nyore kune peji rekusaina. Kungoziva iko kwekutarisa zvaunokwanisa kuchaita kuti uwedzere mwero wekushandura uye bhizinesi rako rose.
Nenzira imwecheteyo, iwe unogona kudzokorora mapeji anotungamira uye wedzera rumwe ruzivo rwepamusoro-kana-freshen kumusoro kwayo yakazara. Kuwedzera, iwe unogona kudzoreredza izvo zvakabudirira zvirimo pane mamwe chiteshi uye nekuzvishandura kune zvemagariro media, webinar zvinyorwa, nezvimwe.
Zvakare, kutsvaga kukurumbira kwemukati menyu kucharatidza izvo zvimedu zvisiri kushanda zvakanaka. Iwe unogona kushandisa nguva yekuvandudza izvo zvisinganyanyo kufarirwa zvemukati, kana kungoshandisa shandisirwo kana uchigadzira nyowani - zvakanyanya kukosha - zvemukati.
Simbisa yako webhusaiti SEO
Yekutsvagisa injini yekugadzirisa (SEO) inokosha mukubudirira kwewebsite yako uye saka bhizinesi rako. Iyo yakakwira huwandu hwemafambisi webhusaiti yako inokwezva, iyo yakakwira iyo nhamba inotungamira uye shanduko.
Webhusaiti analytics inogona kuwedzera yako SEO munzira dzakati. Nekuziva kwenzvimbo dzevanofarira dzevashanyi uye huwandu hwevanhu, uri nani kugona kuburitsa zvakatemwa zviratidze paGoogle nedzimwe injini dzekutsvaga. Zvakare, kutevedzera zvifambiso zvichakupa backlinks njere.
Kana iwe ukasanganisa yako analytics chishandiso neGoogle, unogona kutevedzera mitsara yekutsvaga iyo inogadzira zvakanyanya traffic kune yako webhusaiti Izvi zvinobatsira pakuona kuti iwo mazwi akakosha uye mitsara anoiswa kuti ashandise mune zvako zvemukati nemetadata.
Iwe unogona kunyange kuenda nhanho imwe zvakare uye shandisa saiti yekutsvaga. Izvi zvinoratidza iwe izvo vashanyi vari kutsvaga pavanouya kune webhusaiti yako. Iyi sarudzo ye analytics inokutendera iwe kuti uone kana izvo zviripo zviripo zvinoenderana nezvinodiwa nevashanyi vako. Kuziva kuti kana usiri kusangana nezvavari kutarisira zvinokubvumira kuti ugadzirise zvawataura kuti zvipe yakanakisa mushandisi ruzivo uye kushandura vashanyi kuva vatengi. Iwe unogona kunyange kukurudzira mamwe mazano ezvinyorwa zvitsva zveblog, zvakare.
Kuzivikanwa pamusoro pezvekuendeswa
Webhusaiti analytics inogona kuongororesa kwaunobuditswa kwakawanda kupi Kana iwe uchinge waona dzako dzepamusoro dzinotumirwa, unogona kushanda pane zviyero kuti uwedzere ivo mberi. Zvakare, kuziva nzvimbo dzako dzisina kusimba kunokutendera kuti uzvinatse uye ugoita traffic yakawanda kune yako saiti.
Kana, semuenzaniso, yako webhusaiti inowana yakawanda yevashanyi vayo kubva kuinjini dzekutsvaga, izvi zvinokuudza kuti SEO yako iri kushanda nemazvo. Kana, kune rumwe rutivi, vashanyi vako vachiwanzo kunge vachiuya kubva kuFacebook kushambadziro uye zvachose kana kubva kuinjini dzekutsvaga, unogona kuita yakawanda yeiyo Facebook peji rako uchizvirimawo SEO yako kuti ushandise zvirinani injini dzekutsvaga.
Ziva yako yakabuda mabhandare
Zvakare nekuziva kwaunobva kwaunobva, webhu saiti webhusaiti inokuudza iwe wauri kureva, zvimwe inozivikanwa seyakabuda mabhatani. Kana iwe uchinge wanyora yako yakakura yekubuda zvinongedzo, iwe unogona kushandisa ruzivo urwu kuti ubatane neavo varidzi webhusaiti uye nekupa mazano kushandira pamwe.
Kubatidzana nemamwe mabhizinesi kunogona kubatsira kwako kukura. Kuyambuka-kukwidziridzwa uye kuenderana kurudziro inzira huru dzekubatsira ese emabhizinesi ako mumubatanidzwa. Kuziva kuti ndekudyidzana kwebhizinesi kunozobatsira iwe zvakanyanya, uye kwavari, ndiyo nhanho yekutanga kuumba hukama hwakakosha. Iwe unogona kusvika kune bhizimusi rekutarisako uye ugovana newe analytics report navo, uchivaita kuti vawirirane nechikumbiro chako.
Tevera e-commerce metrics
Bhizinesi rako rinogona kutengesa masevhisi, zvigadzirwa, software kana chimwe chinhu chakasiyana pamwe chete. Chero chipi chaunotengesa, yako webhusaiti kutengesa mushumo ndeye yakakosha mushumo kuti uzive. Iwe unogona kuona akakosha akadzika akadai sekushandura mareti, kudhonzwa kwepamusoro, mari yakakwana uye zvigadzirwa zvinotungamira, nezvimwe, zvese zviri mukati meimwe mushumo. Paunoziva, semuenzaniso, chii chinotungamira chigadzirwa chiri, iwe unogona kuisa pfungwa pakubata kwako mukusimudzira izvo zvinowedzera mberi mumakero akasiyana siyana. Kuramba uchikurukurirana nemaitiro ekuendesa zvakare kunobatsira pakuronga kushandira pamwe kwemberi izvo zvinozoguma mukutengesa kwakawanda. Kutsvaga yako e-commerce metrics chikamu chinodiwa kukura bhizinesi rakabudirira.
Ndeipi yeWebhu Analytics chishandiso chandinofanira kushandisa?
Kune akawanda webhusaiti analytics maturusi aripo uye zvakakosha kusarudza chinyorwa chakakwana kubva kune yakavimbika, ine mukurumbira kambani. Semalt Web Analytics inopa dzakasiyana siyana dzekunzwisisa zvishandiso kubatsira bhizinesi rako kukura.
Yakatangwa muna 2013, Semalt ndeyekucheka-kumucheto yakazara-yakazara stack yedhijitari. Ivo vanopa webhu zvishandiso zvepamberi analytics masevhisi pamwe nehuwandu hweSEO uye mamwe mabasa ewebhu. Semalt ane mazana evatengi vanoguta, vazhinji vavo vakasiya zvakanyorwa uye vhidhiyo ongororo pane webhusaiti yekambani.
Semalt inogona kukubatsira iwe kuti:
Tarisa ako akisi webhusaiti
Ongorora kuoneka kwewebsite yako
Wongorora webhusaiti dzinokwikwidza
Ziva pane-peji optimization zvikanganiso
Gamuchirwa yakadzama mishumo yewebhu mishumo
Chikwata chiri paSemalt chinotaura mitauro yakawanda kusanganisira Chirungu, French, Italian, Turkish, nevamwe vazhinji, saka musafunganya pamusoro penyaya mutauro unovhiringidza pakati pewe nekukura kwebhizinesi rako. Nhengo dzechikwata inyanzvi mumunda wako uye dzakagadzirira kutora zvaunobvunza.
Muna 2014, timu yeSemalt yakatamira kuhofisi itsva. Pavakasvika, vakashamisika kuwana turtle mune maruva. Mushure mekuferefeta, vakaziva kuti muridzi wehofisi yaive yake yaive yake asi yakanga isisamude. Chikwata ichi chaingofara zvakanyanya kuva nemumwe nhengo. Vakachengeta turtle uye vakamutumidza Turbo. Vakapedza nguva vachidzidza nezvezvakanakisisa zvekudya zvemaguru uye maitiro ekuzvitarisira uye munguva pfupi vakamutengera imwe hombe huru yemahara. Iye zvino, anogara achifara muhofisi yeSemalt uye akasimudzirwa kukambani mascot.
Kusvika pakubata newebsite analytics kunogona chaizvo kuita mutsauko pakati pebhizinesi rako riri kuwedzera, kumahombekombe kana kutombokundikana. Kuziva vashanyi vako uye zvavari kutsvaga chinhu chakakosha pakuvandudza kuwanikwa kwako kwepamhepo uye kunyatso kushambadzira chigadzirwa chako. Kusarudza chishandiso chine zita rakadai seSemalt Web Analytics kuchakubvumidza kuti uongorore zvemukati uye kubudirira kwekutengesa, ziva huwandu hwevashanyi vako uye, zvinonyanya kukosha, kuvandudza kushanya kwako kune chiyero chekushandura kwekutengesa.